नि: शुल्क यूट्यूब सदस्यता र नि: शुल्क यूट्यूब लाइक
तपाईंको YouTube च्यानलको विकास आज बढाउनुहोस्!
हाम्रो सरल सञ्जालले तपाइँलाई YouTube सदस्यहरू प्राप्त गर्न र तपाइँको च्यानलको लागि मनपर्ने अनुमति दिन्छ। सहज वृद्धिको लागि उत्कृष्ट भुक्तानी विकल्पहरू पनि उपलब्ध छन्।
नि: शुल्क यूट्यूब सदस्यहरु पाउनुहोस् or YouTube सदस्यहरू खरिद गर्नुहोस्
1 कदम। साइन अप र लगईन
मुख्य सुविधाहरू र लाभहरू
निःशुल्क उपयोग गर्न
यदि तपाईं योजना सक्रिय गर्न प्रत्येक दिन केहि मिनेट लिन आपत्ति राख्नुहुन्न भने, हामी उत्कृष्ट विकल्पहरू प्रदान गर्दछौं जुन प्रति दिन १० नि: शुल्क ग्राहकहरू र २० नि: शुल्क YouTube लाइकहरू प्रदान गर्दछ।
तपाईं जस्तै तपाइँउपयोगकर्ताहरू अन्य YouTubers बीचका ग्राहकहरू पछाडि फर्काउन यो विनिमय सेवा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
SoNuker सेवा सुरक्षित र सुरक्षित छ! YouTube च्यानलहरूले हाम्रो सेवा प्रयोग गर्न दण्डित नगरेको र हामी गोपनीयता, सुरक्षा र कडा गोपनीयताको साथ काम गर्छौं।
यदि तपाइँ सहजै मनपर्छ र स्वचालित रूपमा YouTube ग्राहकहरू र भिडियो मनपर्ने मनपर्नेहरू प्रत्येक दिन मनपर्छ भने, त्यसपछि हामी शून्य प्रयास, दैनिक वृद्धि प्राप्त गर्नको लागि भुक्तानी योजना सिफारिस गर्दछौं!
हाम्रो सञ्जाल प्रयोग गर्न सबैको लागि अत्यन्त आधारभूत र सरल हुन डिजाइन गरिएको थियो। खाता दर्ता गर्नुहोस्, लगइन र बाकी आत्म-व्याख्यात्मक छ!
हाम्रो अनुकूल मित्र टोली यहाँको लागि यहाँ छ! प्रश्न, टिप्पणी, वा चिन्ता छ? हामी सरल ईमेल हो र हामी 24-72 घण्टा भित्र हरेक अन्वेषणको जवाफ दिन्छौँ।
म नि: शुल्क सदस्यता र मनपर्दो अब चाहन्छु!
किन SoNuker प्रयोग गर्ने?
यो प्रयोग गर्न सित्तैं हो!
SoNuker एक अभिनव नेटवर्क प्रदान गर्दछ जुन तपाईंलाई छिटो र सजीलै प्राप्त गर्न अनुमति दिँदछ 10 नि: शुल्क यूट्यूब सदस्यहरू र 10 नि: शुल्क यूट्यूब लाइक हरेक १२ घण्टा! सशुल्क योजनाहरू उपलब्ध छन्, तर नि: शुल्क योजनाहरू तपाईंको च्यानल बढाउन अझै प्रभावकारी छन्। तपाइँले तपाइँको YouTube खातामा लग इन गर्न आवश्यक पर्दैन हाम्रो वेबसाइट पहुँच गर्न, तपाइँको YouTube च्यानल जानकारी सुरक्षित र सुरक्षित राखेर।
यो प्रयोग गर्न सजिलो छ!
SoNuker सम्भव भएसम्म सरल हुन डिजाइन गरिएको थियो! तपाईंको समय महत्त्वपूर्ण छ र हामी त्यो बुझ्छौं। यूट्यूबका नि: शुल्क ग्राहकहरु र मनपर्दो प्राप्त गर्न को लागी २० अन्य च्यानलहरु लाई मनपराउनु र सदस्यता लिनु। तपाइँ 20 घण्टा भित्र तपाइँको ग्राहकहरु लाई प्राप्त र निरन्तर वृद्धि को लागी हरेक १२ घण्टा यो प्रक्रिया दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ।
तपाईं तत्काल परिणामहरू देख्न सक्नुहुन्छ!
जब तपाइँ नि: शुल्क वा भुक्तान योजना सक्रिय गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको सदस्यताहरू द्रुत रूपमा बढ्न सुरू गर्नुहुनेछ। म्यानुअल रूपमा प्रत्येक १२ घण्टामा नि: शुल्क योजना सक्रिय गर्नुहोस्, वा १००% स्वचालित भुक्तान योजना सक्रिय गर्नुहोस्। एक सशुल्क योजना सक्रिय गर्नुहोस् र स्वचालित रूपमा प्रत्येक दिन सदस्यहरू प्राप्त गर्नुहोस्!
YouTube ग्रोथ योजनाहरू
गल्तीहरु बाट बच्न को लागी जब तपाइँ अधिक नि: शुल्क YouTube ग्राहकहरु चाहानुहुन्छ
के तपाइँ एक YouTuber हुनुहुन्छ जो आफ्नो च्यानल छिटो बढ्न चाहन्छ? सयौं युट्युब च्यानलहरु हरेक दिन सुरु भईरहेका छन्, यूट्यूब मा बाहिर उभिन अब पहिले भन्दा कठिन छ। तपाइँ तपाइँको सामग्री मा तपाइँको कडा मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ, र अझै पनी पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाइँको विचारहरु चार अंक को आंकडा पार गर्न अस्वीकार। एक प्लेटफर्म मा जहाँ मानिसहरु लाखौं विचारहरु र सफलता को कथाहरु हरेक कुना वरिपरि छन्, तपाइँ कसरी ती सफलताहरु मध्ये एक बन्नुहुन्छ?
यूट्यूब सब्सक्राइबर को एक प्रतिबद्ध समूह भएको हुन सक्छ वास्तवमा तपाइँलाई के चाहिन्छ यदि तपाइँ आफैंलाई तपाइँको च्यानलको ढिलो बृद्धि संग निराश महसुस गर्नुहुन्छ। नि: शुल्क ग्राहकहरु बिना, र राम्रो सामग्री संग, तपाइँ अझै पनी आशा गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँको च्यानल समय संगै बढ्न सक्छ। यो प्राय गर्छ, तर यो धेरै मानिसहरु को लागी पनि हुँदैन। यो जहाँ नि: शुल्क ग्राहकहरु र नि: शुल्क मनपर्ने तपाइँको च्यानल लाई यो एक्सपोजर को आवश्यकता दिन सक्छ।
किन नि: शुल्क यूट्यूब सदस्यहरु पाउनुहोस्?
तपाइँको YouTube च्यानल लाई एक प्रारम्भिक धक्का दिन को लागी एक महान तरीका यूट्यूब ग्राहकहरु को मद्दत संग छ। अन्ततः, तपाइँको च्यानल को सब्सक्राइबर्स को संख्या, तपाइँ प्लेटफर्म मा कत्तिको सफल हुनुहुन्छ मा एक महान भन्नुभएको छ। यसले वास्तविक यूट्यूब ग्राहकहरुलाई तपाइँको च्यानल को सदस्यता लिन को लागी प्रोत्साहित गर्न सक्छ। जब सही गरीयो, तपाइँको YouTube ग्राहकहरु तपाइँ तपाइँको YouTube च्यानल छिटो तपाइँको अपेक्षा को तुलना मा मा सक्षम बनाउन सक्नुहुन्छ।
जब एक सम्भावित यूट्यूब सब्सक्राइबर भिडियो बाट आउँछ, उनीहरु तपाइँको भिडियो को लाइक र हेराईहरु जाँच गर्न बन्द हुनेछन्। उनीहरु तपाइँको च्यानल को सदस्यहरु को संख्या मा हेर्छन्। यदि तपाइँको च्यानल लाई लाग्छ कि यो अधिक ग्राहकहरु छ, तब यो उपस्थिति दिन सक्छ कि तपाइँ कसैलाई धेरै मानिसहरु लाई पछ्याउन र विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। यो पालो हो, तपाइँको YouTube लाई मनपर्ने र तपाइँको सामग्री को सदस्यता को लागी वास्तविक YouTube ग्राहकहरुलाई आमन्त्रित गर्दछ।
सफलतापूर्वक तपाइँको यूट्यूब च्यानल मापन गर्न को लागी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को उपयोग गर्न को लागी एक निर्दिष्ट अवधि मा लगातार तपाइँको च्यानल बृद्धि गर्नु हो। यदि मानिसहरु लाई थाहा छ कि तपाइँ अचानक राती १०,००,००० अनुयायीहरु प्राप्त गर्नुभयो, तब यो संदिग्ध देखा पर्न सक्छ। जब यो हुन्छ, तपाइँ केहि मानिसहरु लाई तपाइँको सामग्री को माध्यम बाट पोर गर्न को लागी बुझ्न को लागी तपाइँ यति धेरै ग्राहकहरु लाई यति छिटो प्राप्त गर्न को लागी आशा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँसँग सामग्री को कुनै भाइरल टुक्रा छैन कि बृद्धि को व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, उनीहरु बुझ्न सक्छन् कि ग्राहकहरु प्रामाणिक छैनन्।
यसको सट्टामा, तपाइँ तपाइँको नि: शुल्क यूट्यूब सब्सक्राइबरहरु लाई उही नम्बर सम्म पुग्न को लागी फैलाउन सक्नुहुन्छ, कुनै पनी शंका उत्पन्न नगरीकन। SoNuker एक प्लेटफर्म हो कि तपाइँ वास्तव मा त्यो गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। प्रत्येक दिन लगभग दस देखि बीस अनुयायीहरु को एक स्थिर बृद्धि संग, तपाइँ तपाइँको यूट्यूब ग्राहकहरु को संख्या मा एक लगातार वृद्धि देख्न को लागी आशा गर्न सक्नुहुन्छ। यो गति मा हुन्छ, भले ही यो समय को एक अवधि मा फैलिएको छ, अझै पनी छिटो छिटो छ जब तपाइँको च्यानल स्वाभाविक रूप मा स्केलिंग को तुलना मा।
यसको पछाडिको कारण यो हो कि मानिसहरु पहिले नै लोकप्रिय YouTube च्यानलहरु बाट रमाईलो गर्न को लागी पर्याप्त राम्रो गुणस्तरीय सामग्री छ। तेसैले यदि तपाइँ उनीहरुको ध्यान तपाइँको तिर आकर्षित गर्न चाहानुहुन्छ, यो प्राप्त गर्ने एक कुशल तरीका भ्रम संग छ कि तपाइँ पहिले नै ध्यान तपाइँ चाहानुहुन्छ। अनिवार्य रूपमा, यो नक्कली हो जब सम्म तपाइँ यसलाई ऊर्जा बनाउनुहुन्छ, यो बाहेक यो नयाँ यूट्यूब ग्राहकहरु, दृश्यहरु लाई ल्याउन को लागी काम गर्दछ र तपाइँको च्यानल लाई मनपर्छ।
जबकि धेरै धेरै यूट्यूब सब्सक्राइबर धेरै चाँडै एक कोर गल्ती धेरै मानिसहरु लाई गर्न को लागी हो, यो मात्र एक होइन। यहाँ सबै थोक तपाइँ गल्तीहरु को बारे मा जान्नु पर्छ जब तपाइँ YouTube सब्सक्राइबर्स प्राप्त गर्न बाट बच्नै पर्छ, र किन।
1. ग्राहकहरु बाट कुनै संलग्नता
एक लाख सदस्यहरु संग एक च्यानल तर धेरै टिप्पणीहरु मा कुनै टिप्पणी वा मनपर्ने छैन, र शायद धेरै भिडियो मा केहि सय दृश्यहरु पागल देखिन्छ, हैन? जब तपाइँ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँले पनि सब्सक्राइबर, लाइक, कमेन्ट र हेरीयो बीचको अनुपात कायम राख्न आवश्यक छ।
जबकि टिप्पणी र मनपर्ने भिडियोहरु को बीच फरक हुन सक्छ, उनीहरु एक प्रवृत्ति देखाउनु पर्छ। यो सामान्यतया प्रत्येक भिडियो मा टिप्पणी को एक औसत संख्या देखी को रूप मा आउँछ। तपाइँको दृश्य गणना सँधै मनपर्ने र टिप्पणीहरु को संख्या तपाइँको भिडियोहरु को तुलना मा अधिक छ। तपाइँको भिडियो लाई लाइक को संख्या पनि सामान्यतया टिप्पणी को संख्या भन्दा उच्च हुनेछ। आदर्श रूप मा, तपाइँ तपाइँको भिडियो मा मन नपर्ने भन्दा धेरै मनपर्ने हुनु पर्छ। धेरै धेरै मन नपर्नेहरु नराम्रो संग प्रतिबिम्बित गर्न सक्छन् र यूट्यूब दर्शकहरुलाई तपाइँको च्यानल को सदस्यता लिन बाट रोक्न सक्छन्।
SoNuker को साथ, तपाइँ न केवल यूट्यूब ग्राहकहरु, तर यूट्यूब लाईक पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाइँ एक सफल र छिटो स्केलिंग च्यानल को उपस्थिति दिन को लागी, तपाइँलाई आवश्यक छ कि विचारहरु र मनपर्नेहरु को बीच सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
2. तपाइँको अपेक्षाहरु मापन गर्नुहोस्
अर्को कारक तपाइँलाई ध्यान मा लिनु पर्छ बुझ्न को लागी तपाइँ तपाइँको यूट्यूब ग्राहकहरु बाट के आशा गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाइँ उनीहरुलाई वास्तविक ग्राहकहरु जस्तै कार्य गर्न को लागी आशा गर्नुहुन्छ, तब तपाइँ निराश हुन सक्नुहुन्छ। नि: शुल्क YouTube ग्राहकहरु दुई रूपहरु मा आउन सक्छन्।
यी मध्ये पहिलो बट्स हुन्। यी यूट्यूब च्यानलहरु छन् कि विभिन्न यूट्यूब च्यानलहरु को लागी ग्राहक गणना निर्माण को विशिष्ट उद्देश्य को लागी बनाईएको हो। उनीहरु या त कुनै प्रोफाईल तस्वीरहरु, वा एक स्पष्ट स्टक छवि छन्। धेरै पटक तपाइँको भिडियो मा स्पाम टिप्पणी छोड्नुहोस्। यो खतरनाक हुन सक्छ, किनकि यो तुरुन्तै तपाइँको च्यानल को सदस्यता बाट धेरै मानिसहरुलाई रोक्न सक्छ। युट्युबको यस्तो खाताहरु बिरुद्ध कडा नीति छ। तेसैले यदि तपाइँ यूट्यूब ग्राहकहरु चाहानुहुन्छ, प्लेटफार्महरु बाट बच्न को लागी कि उनीहरुलाई बट्स को माध्यम बाट प्रस्ताव गर्नुहोस्।
अन्य विकल्प सीधै अन्य यूट्यूब सामग्री निर्माताहरु को साथमा अन्तरक्रिया गर्न को लागी हो जो स्केल र उस्तै तरीकाले आफ्नो च्यानल बृद्धि गर्न खोजिरहेका छन्। यूट्यूब सदस्यहरु तपाइँ अत्यधिक तपाइँको च्यानल संग संलग्न हुन सक्छ, तर ती प्रामाणिक खाताहरु हुन्। धेरैले तपाइँलाई यूट्यूब मनपर्ने छोड्नेछन् यदि तपाइँ उनिहरुको लागी उस्तै गर्नुहुन्छ।
समय संगै, त्यस्ता यूट्यूब ग्राहकहरु को अतिरिक्त तपाइँको च्यानल लाई तपाइँ चाहानु भएको एक्सपोजर प्राप्त गर्न सक्षम गर्न सक्नुहुन्छ। यो यूट्यूब एल्गोरिथ्म विभिन्न प्रामाणिक खाताहरु तपाइँको च्यानल को सदस्यता लिईरहेछन् र तपाइँका भिडियोहरु लाई मनपराउन शुरू गर्न को लागी शुरू हुनेछ।
यदि तपाइँ तपाइँको भिडियो मा कम संख्या मा टिप्पणी को संख्या को बारे मा चिन्तित हुनुहुन्छ, तब मद्दत को लागी तपाइँको यूट्यूब ग्राहकहरु लाई सोधेर विचार गर्नुहोस्। SoNuker जस्तै एक प्लेटफर्म मा, तपाइँ तपाइँको यूट्यूब च्यानल को बृद्धि बढाउन अन्य यूट्यूब सामग्री निर्माताहरु संग सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जब यो यस्तो आदान प्रदान गर्न को लागी आउँछ, तपाइँ यो पनि विचार गर्नु पर्छ कि तपाइँ पनी अन्य सामग्री निर्माताहरु लाई पनि मद्दत गर्न को लागी अपेक्षित हुनुहुन्छ।
३. युट्युब सब्सक्राइबरहरु तपाइँको लागी के गर्न सक्छन्
जब सम्म तपाइँ मात्र YouTube सदस्यहरु मा भरोसा गरेर तपाइँको च्यानल निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ, संभावना छ कि तपाइँ तपाइँको च्यानल को लागी वास्तविक YouTube ग्राहकहरु चाहानुहुन्छ। युट्युब सब्सक्राइबरहरु को उपयोग को लागी विचार तपाइँको च्यानल को बृद्धि बढाउन को लागी संख्याहरु को उपयोग गर्न को लागी हुनु पर्छ। यो पालो हो वास्तविक यूट्यूब सब्सक्राइबरहरु लाई आकर्षित गर्दछ जो मा बाट, तपाइँको सामग्री संग संलग्न हुनेछन्।
जब तपाइँ यूट्यूब सब्सक्राइबर पाउनुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको सामग्री प्लेटफर्ममा पुग्ने एक्सपोजर बढाउने कोशिश गर्नुहुन्छ। यूट्यूब एल्गोरिथ्म तपाइँको सामग्री लाई बढावा दिन को लागी सम्भव छैन जब सम्म यो तपाइँको सामग्री मा रुचि राख्ने एक समुदाय भेट्टाउँछ। र चूँकि त्यहाँ यूट्यूब मा लगभग हरेक स्थान मा लोकप्रिय सामग्री निर्माताहरु छन्, यो एक हानि मा नयाँ सामग्री निर्माताहरु राख्छ।
यदि तपाइँ कोहि हुनुहुन्छ जो केहि समय को लागी एक यूट्यूब च्यानल छ तर विचार र लाइक मा ल्याउन मा थोरै सफलता पाउनुभयो। त्यसोभए तपाइँ यूट्यूब ग्राहकहरु प्राप्त गर्न बाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ पाउनुहुन्छ कि तपाइँ कुनै पनी अधिक दर्शकहरु प्राप्त गर्नुहुन्न, तब संभावनाहरु छन् कि तपाइँको भिडियो कसैलाई सिफारिश गरीरहेको छैन र पर्याप्त एक्सपोजर प्राप्त गरीरहेको छैन। समय को एक तोकिएको अवधि मा केहि यूट्यूब ग्राहकहरु एल्गोरिथ्म सोच्न को लागी कि तपाइँको सामग्री एक्सपोजर प्राप्त गरीरहेको छ, र यसैले प्रचार गर्न को लागी आवश्यक हुन सक्छ।
4. आफ्नो कर्षण निर्माण गर्नुहोस्
यूट्यूब मा सफल बन्ने अन्ततः तपाइँको सामग्री को गुणवत्ता मा तल आउँछ। तपाइँ लाखौं यूट्यूब ग्राहकहरु हुन सक्नुहुन्छ, तर उच्च गुणस्तरीय सामग्री बिना, तपाइँ कर्षण तपाइँ वास्तविक दर्शकहरु बाट चाहानुहुन्न। र जब देखि वास्तविक दर्शकहरु र स्थिर बृद्धि हो के तपाइँ प्लेटफर्म को माइलस्टोन सम्म पुग्न को लागी सक्षम गर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाइँको च्यानल को लागी गति प्राप्त गर्न को लागी एक महान तरीका हो।
एक पटक तपाइँ च्यानल मा जोखिम र कर्षण को एक निश्चित राशि को विकास गरीयो। तपाइँको सामग्री मुद्रीकरण र यूट्यूब संग साझेदार पनि। त्यो प्रारम्भिक गति शुरू गरीरहेको छ के तपाइँको YouTube च्यानल लाई असफलता र सफलता बाट अलग गर्न सक्छ। र यो जहाँ नि: शुल्क YouTube ग्राहकहरु तपाइँलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
एकै समयमा, तपाइँ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स मा धेरै निर्भर हुनुहुन्न, बरु तपाइँको सफलता ईन्धन गर्न को लागी उनीहरुको मद्दत को उपयोग गर्नुहोस्।
5. सामग्री को बारे मा नबिर्सनुहोस्
तपाइँले सिर्जना गर्नुभएको सामग्री के हो तपाइँ यूट्यूब मा एक स्थायी च्यानल निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। तपाइँको सामग्री मा फोकस, र यूट्यूब सब्सक्राइबर को छेउमा प्रयोग गरीरहेको छ कि सामग्री को दृश्यता तपाइँ सफलता को लागी सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ सधैं त्यो सीमा को लागी देख्नु पर्छ, जसको पछाडि वास्तविक दृश्यहरु, ग्राहकहरु र मनपर्नेहरु लाई पछ्याउन।
जे होस्, धेरै सामग्री निर्माताहरु प्राय राम्रो सामग्री बनाउन को लागी बिर्सन्छन्। यसको सट्टा, उनीहरु यूट्यूब ग्राहकहरु को संख्या मा भरोसा गर्छन् र यूट्यूब लाई उनीहरुलाई सफलता को रूप दिन मनपर्छ। जब यो हुन्छ, यो वास्तविक दर्शकहरु लाई स्पष्ट हुन सक्छ प्लेटफार्म को प्रयोगकर्ता हो कि तपाइँको दृश्यता नि: शुल्क ग्राहकहरु र मनपर्ने बाट हो। यदि यो हुन्छ, धेरै सम्भावित ग्राहकहरु तपाइँको सामग्री संग संलग्न को बारे मा सावधान हुन सक्छ।
यदि तपाइँसँग उच्च गुणस्तरीय सामग्री छ भने, तपाइँ सफलतापूर्वक तपाइँको YouTube सब्सक्राइबर र लाइक को माध्यम बाट प्राप्त संख्याहरु लाई लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ, तपाइँको च्यानल को लागी बृद्धि गर्न।
6. तपाइँको च्यानल बढाउन को लागी अन्य तरीकाहरु को उपयोग गरीरहेको छैन
जबकि यूट्यूब सब्सक्राइबर र यूट्यूब लाइकले तपाइँलाई तपाइँको च्यानल बढाउन मद्दत गर्न सक्छ, यो तपाइँको लागी मात्र उपलब्ध विकल्प हैन। यसको बावजूद यो तपाइँको यूट्यूब च्यानल बढ्न को लागी एक राम्रो तरीका हो, तपाइँ अधिक सफलता पाउनुहुनेछ जब तपाइँ यसलाई अन्य रणनीतिहरु संगै प्रयोग गर्नुहुन्छ।
तेसैले यदि तपाइँ पहिले नै यूट्यूब सब्सक्राइबर प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ पनी रणनीतिहरु जस्तै giveaways, प्रतियोगिताहरु र कूपन को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको च्यानल को लागी अधिक वास्तविक ग्राहकहरु लाई प्राप्त गर्न को लागी। तपाइँको च्यानल को लागी सम्भावित ग्राहकहरुको ध्यान आकर्षित संगै, तपाइँ पनि आदर्श रूप मा आफ्नो ध्यान कायम राख्न चाहानुहुन्छ। यसले उनीहरुको च्यानलको सदस्यता लिने सम्भावना बढ्छ।
उपहार को उपयोग गरेर, तपाइँको च्यानल लाई बढ्न मद्दत गर्न को लागी मानिसहरु लाई धन्यवाद, र तपाइँको दर्शकहरु संग संलग्न हुने अन्य तरिकाहरु लाई खोज्न को लागी तपाइँको च्यानल को लागी छिटो बृद्धि सक्षम गर्न सक्छ।
तपाइँ कहिले सम्म तपाइँको च्यानल बृद्धि गर्न को लागी नि: शुल्क यूट्यूब सब्सक्राइबर प्राप्त गर्न जारी राख्नु पर्छ?
जब तपाइँ पहिलो पटक तपाइँको च्यानल को लागी तपाइँको यूट्यूब ग्राहकहरु पाउनुहुन्छ, तपाइँ उत्साहित महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि गति अन्ततः तपाइँको च्यानल को लागी जाँदैछ। त्यसोभए मानौं एक महिना बित्छ र तपाइँको च्यानल तपाइँको अपेक्षा भन्दा राम्रो बढ्दैछ। यो सही समय हो कि यूट्यूब ग्राहकहरु बाट मद्दत प्राप्त गर्न बन्द गर्नुहोस्।
सही जवाफ यो हो कि तपाइँ कहिले सम्म यूट्यूब ग्राहकहरु र यूट्यूब लाईक मा निर्भर रहनु पर्छ विभिन्न कारकहरु मा निर्भर छन्।
एक लोकप्रिय आला मा तपाइँको सामग्री छ, र यो आफ्नो आफ्नै मा पर्याप्त विचारहरु लाई आकर्षित गर्न सक्छ?
यदि तपाइँको सामग्री एक लोकप्रिय आला मा छ, तपाइँ विश्वस्त हुनुहुन्छ कि तपाइँ तपाइँको आला मा लोकप्रिय सामग्री निर्माताहरु बाट भीड तान्न सक्नुहुन्छ?
यदि तपाइँको सामग्री एक अधिक अस्पष्ट आला मा छ, तब कती कर्षण तपाइँको सामग्री वास्तविक दर्शकहरु बाट प्राप्त गरीरहेको छ?
के तपाइँ पर्याप्त विश्वस्त हुनुहुन्छ कि तपाइँ यूट्यूब ग्राहकहरु को मद्दत बिना तपाइँको यूट्यूब च्यानल बढ्दै राख्न सक्नुहुन्छ।
व्यक्तिगत परिदृश्यहरु लाई एक भन्न को लागी तपाइँ कती लामो समय सम्म YouTube ग्राहकहरु मा भरोसा राख्नु पर्छ। जे होस्, चाहे तपाइँको सामग्री अझै पनी कर्षण प्राप्त गर्न को लागी एक बढावा चाहिन्छ एक निर्धारक कारक हो।
यसको मतलब यो हो कि तपाइँ भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ र यूट्यूब ग्राहकहरु मा भरोसा गर्न रोक्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाइँ चाहानुहुन्छ। तपाइँ पनी पछि यूट्यूब सब्सक्राइबर को लागी सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाइँलाई यो आवश्यक पर्दछ।
SoNuker संग, तपाइँ लचिलो नि: शुल्क यूट्यूब ग्राहकहरु मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् तपाइँको संख्या एक महिना को लागी बढ्छ, र त्यसपछि यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ आफैंले तपाइँको च्यानल बढाउन जारी राख्न सक्नुहुन्छ, तब महान! कहिलेकाहीँ, मानिसहरु एक, वा केहि भिडियोहरु लाई बढावा दिन को विशिष्ट प्रयोजनहरु को लागी यूट्यूब ग्राहकहरु र यूट्यूब लाईक को उपयोग गर्दछन्।
तपाइँ कसरी एक्सपोजर को आवश्यकता छ र तपाइँ तपाइँको YouTube च्यानल बृद्धि गर्न को लागी YouTube ग्राहकहरु को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँ मा निर्भर छ। जे होस्, के तपाइँ कहिल्यै आफुलाई यूट्यूब ग्राहकहरु र यूट्यूब लाईक को मद्दत को आवश्यकता छ, तब तपाइँ सधैं SoNuker मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँलाई मद्दत गर्न को लागी।
किन मानिसहरु नि: शुल्क YouTube सदस्यहरु छनौट गर्छन्?
सफलता को बाटो कठिन हुन सक्छ, र यूट्यूब मा, कठिनाई प्रतियोगिता द्वारा exacerbated छ। मानिसहरु प्राय युट्युब सब्सक्राइबर्स मा खेल मैदान स्तर को एक तरीका को रूप मा भरोसा गर्दछन्, खास गरी यदि उनीहरु नयाँ सामग्री निर्माता हुन्।
यो यूट्यूब जस्तै एक प्लेटफर्म मा ध्यान दिइरहेको रूपमा असाधारण गाह्रो हुन सक्छ। जे होस्, एक पटक तपाइँलाई थाहा छ र यूट्यूब एल्गोरिथ्म सिफारिश र तपाइँको भिडियो लाई बढावा दिन शुरू हुन्छ, सफलता स्वाभाविक रूप बाट पछ्याउन सक्छ। र SoNuker को माध्यम बाट, तपाइँ प्रामाणिक अनुयायीहरु जो तपाइँ पनि पालो मा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ पाउन सक्नुहुन्छ।
नि: शुल्क यूट्यूब ग्राहकहरु मात्र छनौट गर्न को लागी छनौट गरेर, तपाइँ एक निश्चित हद सम्म तपाइँको सफलता लाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी YouTube ग्राहकहरु तपाइँ तपाइँको च्यानल बढाउन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे मा यथार्थपरक अपेक्षाहरु निर्माण मा विचार गर्नुहोस्। यस तरीकाले, तपाइँ आफैंलाई स्केलिंग र छिटो बढ्दै हुनुहुन्छ तपाइँले कहिल्यै सोचेको भन्दा पाउन सक्नुहुन्छ।
सही यूट्यूब अनुयायीहरु र लगातार यूट्यूब लाइकहरु तपाइँ सफलता को लागी तपाइँको च्यानल लाई सेट गर्न मा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सट्टा यूट्यूब एल्गोरिथ्म को लागी तपाइँको सामग्री नोटिस गर्न को लागी पर्खनुको सट्टा, तपाइँ आफैंमा त्यो एक्सपोजर आमन्त्रित गर्नुहुन्न।
यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बिस्तारै प्रयोग गर्दै, जस्तै प्रति दिन दस देखि बीस सदस्यहरु प्राप्त गर्न को लागी तपाइँको च्यानल लाई बढ्न मद्दत गर्न सक्छ। यसले वास्तविक बृद्धि को छाप दिन्छ, र वास्तविक दर्शकहरुलाई तपाइँको च्यानल को सदस्यता लिन को लागी प्रोत्साहित गर्न सक्छ।
एकै समयमा, तपाइँ या त तपाइँको भिडियो मा लाइक प्राप्त गर्न को बारे मा बिर्सन सक्नुहुन्न। मनपर्ने र टिप्पणीहरु तपाइँको च्यानल को लागी सगाई देखाउँछन्, र बृद्धि को प्रमुख संकेतक हुन्। यदि तपाइँका भिडियोहरु लाई अझै पनी तपाइँलाई मनपर्ने लाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, तब यूट्यूब लाईकले तपाइँको लागी समस्या समाधान गर्न सक्छ।
जब तपाइँ YouTube ग्राहकहरु लाई प्राप्त गर्न को लागी SoNuker प्लेटफर्म को उपयोग गर्नुहुन्छ, तपाइँ bots वा स्पाम टिप्पणीहरु को बारे मा लगातार तपाइँको भिडियो मा देखा पर्नु पर्दैन। यसको सट्टामा, तपाइँ तपाइँको यूट्यूब ग्राहकहरु मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँ यूट्यूब लाई पनी मन पराउनुहुन्छ। यूट्यूब को लागी, मनपर्ने र दृश्यहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्छन्। मनपर्ने भन्दा बढी मनपर्ने र नयाँ ग्राहकहरु को एक स्थिर स्ट्रीम तपाइँ यूट्यूब मा तपाइँको च्यानल बृद्धि गर्न को लागी सबै चीज हो।
तपाइँ पनि SoNuker मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँ जान्न को लागी कसरी हाम्रो सेवा को उपयोग गर्न को लागी तपाइँको सफलता लाई राम्रो ईन्धन गर्न को लागी। तपाइँको च्यानल को बृद्धि को गति मापन गर्नुहोस् र नि: शुल्क ग्राहकहरु को मदद संग एक लोकप्रिय YouTuber बन्नुहोस्। तपाइँ हाम्रो सेवाहरु लाई कुनै पनी पनी प्रयोग गर्न रोक्न सक्नुहुन्छ जब तपाइँलाई लाग्छ कि तपाइँ अब आवश्यकता छैन, वा उनीहरुलाई केहि भिडियो वा सामग्री को टुक्राहरु लाई बढावा दिन को लागी प्रयोग गर्नुहोस्।
जबकि त्यहाँ धेरै गल्तीहरु तपाइँ YouTube सब्सक्राइबर प्राप्त गर्दा गर्न सक्नुहुन्छ, स्वस्थ सावधानी को अभ्यास तपाइँ उनीहरु बाट बच्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। सही प्लेटफर्म छनौट गर्न बाट, SoNuker जस्तै, तपाइँ यूट्यूब ग्राहकहरु संग प्रदान गर्न को लागी, जान्न को लागी कसरी संख्या को लाभ उठाउन को लागी तपाइँको सफलता लाई बढावा दिन को लागी। SoNuker संग आज तपाइँको YouTube सपनाहरु को लागी सडक निर्माण शुरू गर्नुहोस्।
एक संक्षिप्त YouTube मार्केटिङ गाइड
सामाजिक सञ्जालको डोमेनमा धेरै खेलाडीहरू छन् - फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटक, र केहि नाम गर्नको लागि रेडडिट। यसको विपरीत, ...
24th डिसेम्बर 2021
थप फलोअरहरू प्राप्त गर्न YouTube को VR सुविधाको अधिकतम फाइदा कसरी लिने
VR, वा भर्चुअल वास्तविकता, एक प्राविधिक नवाचार हो जसले दर्शकहरूलाई कार्यको पहिलो-व्यक्ति परिप्रेक्ष्य दिन्छ। भर्चुअल वास्तविकता उच्च-अन्तमा सीमित छैन ...
XNUM Xnd डिसेम्बर 2
तपाईंलाई "सुपर धन्यवाद" प्रस्ताव गर्न थप YouTube सदस्यहरू प्राप्त गर्न सुझावहरू
२१ जुलाई २०२१ मा, YouTube ले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई YouTube मा पैसा कमाउने वैकल्पिक तरिका प्रदान गर्ने एउटा नयाँ सुविधा ल्यायो। द...
कुनै सदस्यता वा आवर्ती भुक्तानी बिना एक-समय खरीद विकल्पहरू।
500,000 + सदस्यहरू पहिले नै SoNuker को प्रयोग गरी नि: शुल्क यूट्यूब सदस्यहरू र भिडियो मनपर्नेहरू प्राप्त गर्न जुड्नुहोस्!
नि: शुल्क यूट्यूब लाइकहरू पाउनुहोस्
कसरी तपाइँको YouTube सदस्यहरूलाई लामो भिडियोहरू मार्फत बस्न प्रोत्साहित गर्ने
धेरै YouTube भ्यु र बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने भिडियोहरू बनाउनका लागि हट सुझावहरू